१६ बैशाख २०७३, बिहीबार १७:११	0 963
तपाइले कहिले ख्याल गर्नु भएको छ ? तपाइको परिवारमा पुरुष भन्दा महिलाहरु बढी बिरामी हुने गर्छन । यसै सन्दर्भमा भारतको बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली एनसीआर सहरमा एक अनलाइन सर्वेक्षण भएको छ । 'केयर अन गो' शिर्षक मा ६ महिनासम्म सर्वेक्षण गरिएको थियो । औषधि अर्डर र किनमेललाई आधार आधार मानेर गरिएको उक्त सर्वेक्षणबाट अनौठो नतिजा आएको छ ।
१६ बैशाख २०७३, बिहीबार १०:३०	0 910
नेपाली सिरियलहरु मध्ये लोकप्रिय सिरियल हो भद्रगोल । तर भद्रगोलको पछिल्लो एपिसोडमा भूत आतंक छाएको छ । भद्रगोलका मुख्य कलाकार पांडेको मृत्युपछि भद्रगोलमा भूत आतंक सिर्जना भएको हो । जयन्तेसंगै बाटोमा हिडिरहेका उनलाई गाडीले ठक्कर दिएपछि उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । मृत्यु लगतै उनको दाह सस्कार गरिए पनि उनको आत्मा भड्किएको भन्दै सिरियल भद्रगोलमा पाडेको भूत आतंक मच्चिएको छ । पांडेको गाउमा मात्रै होइन बेलासेको मामाघरमा समेत पांडेको भूत पुगेको भन्दै कोकोहोला मच्चिएको छ । थप पढ्नुस....
१५ बैशाख २०७३, बुधबार १०:०७	0 1,060
लामो कपाल महिलाहरुको सौन्दर्यको प्रतिक हो । पुरुषहरु पनि लामो र मुलायम कपाल भएको महिलाप्रति आकर्षित हुन्छन । तर एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँ सबै महिलाको कपाल २ मिटरसम्म लामो छ । सुन्दा अनौठो र अचम्म लागे पनि यो सत्य हो । चीनको दक्षिण पश्चिमस्थित गुइलिन प्रान्तमा पर्ने हुआंग्लुओ गाउँका महिलाहरु अनिवार्य रुपमै कपाल लामो हुने गरि पाल्छन । यो गाउँमा महिलाहरुले लामो कपाल पाल्ने चलन सदियौ देखिको चलन हो । अनौठो त के भने यही कारण यो गाउँको नाम नै गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डसमा दर्ता भएको छ । आखिर किन पाल्छन यति लामो कपाल ? पढ्नुस
१५ बैशाख २०७३, बुधबार ०७:१७	0 4,327
यु-ट्युब र सामाजिक संजालहरुमा यति बेला एउटा भिडियो भाइरल बनिरहेको छ । नेपाल प्रहरीकै बदनामी हुने खालको यो भिडियो ’bout कहाँ कुन ठाउँमा र किन भन्ने कुनै जानकारी छैन तर यहाँ एक महिलालाई दुई प्रहरीले घिसारिरहेको देखिन्छ । महिला चिच्याइरहेका छन् । भनेको नमानेपछि महिला प्रहरीले ति महिलाको कपाल समातेर घिसारेको भिडियोमा देखिन्छ । हेर्नुस भिडियो
१४ बैशाख २०७३, मंगलवार १३:०९	0 628
नेपालीहरुको आकर्षक रोजगारीको गन्तब्य बनेको कोरिया । कोरिया जान मरिहत्ते गर्नेहरुको भिड बर्षेनी बढ्दो छ तर कोरियाले निश्चित परिमाणमा मात्र नेपाली कामदारलाइ कोरिया लैजाने गरेको छ । यसले गर्दा कोरिया जान बिभिन्न परिक्षाहरु पार गर्नु जरुरि छ । त्यसो त यो बर्ष झनै कम मात्रामा नेपाली लैजाने भएको छ । यो बर्ष कोरिया भाषा परीक्षाका लागि केही नया नियमहरु थपिएका छन् । परिक्षा फारम भर्नु पहिले पढ्नुस यी १५ नियम
१३ बैशाख २०७३, सोमबार ०७:४१	0 834
बिनाशकारी भूकम्प गएको पनि एक बर्ष बित्यो । यो दिनको सम्झनामा आइतबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम भए । सरकारले भूकम्प गएको वर्ष दिन पुगेको दिन पारेर पूनर्निर्माण थालेको छ । साथै भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएकाहरुको सम्झनामा दीपप्रज्वलन गरिएको छ । माइतीघर मण्डलामा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंम उपस्थित भएका थिए । वैशाख १२ र २९ को भूकम्पमा परी झण्डै ९ हजारको मृत्यु भएको थियो भने सयौं घाइते भएका थिए । लाखौ सर्वसाधारण घरबारबिहिन भए । उनीहरु मध्ये अधिकांश अझै टहरमै बसेका छन् । राहतका कार्यक्रमहरु प्रचारबाजीमै सिमित भए । भूकम्पले राजधानीमा बनेका थुप्रै महलहरु गर्ल्यामगुर्लम ढले । ति ढलेका दृश्यहरु नजिकका सर्वसाधारणले देखे पनि अन्यले भग्नावशेष मात्र देखे । एक दिन अघि महल ठडिएको ठाउमा भोलिपल्ट भग्नावशेषहरु मात्र देख्दा सर्वसाधारणको मन चिसो मात्रै बनेन पत्याउनै मुस्किल बन्यो । तर यसरी ठूला संरचनाहरु भत्किएका दृश्यहरु कमैले भिडियोमा रेकर्ड गर्न भ्याए । बर्षभरी नै भाइरल बनेको एउटा भिडियो आज हामीले प्रस्तुत गरेका छौ । हेर्नुस
१२ बैशाख २०७३, आईतवार ०८:३४	0 888
नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको आज ठिक एक वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ साल बैशाख १२ गते बिहान ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा गएको ७ दशमलव ८ म्याग्निच्युटको भूकम्पमा परि करिब नौ हजार नेपालीको ज्यान गएको थियो भने दुई हजार २०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । झन्डै पाँच लाख घर ध्वस्त भए । हजारौँ घरबारविहीन भए । इतिहासदेखि अहिलेसम्म कुन कुन देशमा कति ठूलो भूकम्प गयो ? हेर्नुस तस्बिर
१० बैशाख २०७३, शुक्रबार ११:१९	0 705
साँगा अर्थात् विश्वकै अग्लो महादेवको मूर्ति भएको ठाउँ । यही शिव मुर्तिका कारण यो क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको चाप ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । उचाईमा रहेको यो शिवको मुर्तिस्थलबाट निकै रमणीय दृश्यहरु हेर्न सकिन्छ । शान्त बाताबरणमा रमाउन चाहनेहरुका लागि यो ठाउँ निकै उपयोगी छ । साथै डेटिङमा रमाउन चाहने प्रियसी जोडीहरुका लागि त झनै उत्तम गन्तब्य बनेको छ । हेर्नुस फोटोफिचर
१० बैशाख २०७३, शुक्रबार १०:०१	0 1,420
९ बैशाख २०७३, बिहीबार ०७:३८	0 933
परापूर्व कालदेखि नै मेवाको पातहरू घाउ सफा गर्न, दाद र दुखाई निको पार्न प्रयोग गरिँदै आएको पाईन्छ । यसको जरामा पिसाब लगाउने शक्ति हुन्छ । मेवाका रुखको प्रत्येक भागमा कुनै न कुनै औषधिय गुण पाईन्छ । मेवामा पर्याप्त मात्रामा क्यारोटेन नामको तत्व हुन्छ, जसले शरीरमा भिटामिन ए बनाँउछ । यसमा पोटासियम पनि पर्याप्त मात्रामा हुन्छ । साथै भोजन पचाउन चाहिने विभिन्न तत्व हुन्छन् । काँचो मेवा खानाले कब्जियतबाट छुट्कारा दिलाउँछ । पाकेको मेवा कलेजोको विभिन्न समस्या समाधानका लागि लाभदायक हुन्छ । पढ्नुस १५ फाइदा
विश्वकै क्रुर बलात्कारी जसलाई २ सय बर्ष जेल सजाय तोकियो
७ बैशाख २०७३, मंगलवार १२:२३	0 473
'बलात्कार' शब्द समेत हामी सुन्न सक्दैनौ । तर यो भोग्नेको हालत के होला ? त्यसमाथि उमेर नै नपुगेका नानीहरु बलात्कारमा पर्दा हालत के होला ? यो कल्पनाबाहिरको कुरा हो । जुन हामी सोच्न पनि सक्दैनौ । तर कतिपय मान्छेहरु यस्ता हुन्छन जो पशुपंक्षीदेखि नाबालिका र शिशुलाई समेत बलात्कार गर्न पछि पर्दैनन् । हालै अमेरिकामा भएको एउटा घटनाले यो कुरालाई घाम जतिक्कै छर्लंग बनाइ दिएको छ । जसलाई संसारका सबै भन्दा क्रुर बलात्कारी भन्दै २ सय वर्षको जेल सजाय सुनाईएको छ ।
७ बैशाख २०७३, मंगलवार ११:०१	0 822
सोमबार बिहानै अधिकांश अनलाइनमा एउटा न्युजले प्राथमिकता पायो । नेपालमा अहिलेसम्म २० जनाले कपाल प्रत्यारोपण गरिसकेका छन् । यो प्रविधि टाँका लगाइने वा कुनै प्रकारको दाग देखिने खालको होइन । टाउकोमा बढी कपाल भएको ठाउँबाट एक–एकवटा कपाल निकालेर नभएको भागमा रोकिने कार्य हो । कपाल रोप्न कपालको मात्रा अनुसार ४ देखि ६ घन्टा लाग्छ । नेपालका लागि यो नौलो भए पनि बिश्वमा यो कुनै नौलो कुरा होइन । बलिउडका थुप्रै सेलिब्रेटीले कपाल खुइलेर नयाँ कपाल रोपेका छन् । व्यक्तित्व राम्रो देखाउनका लागि पनि कपालको ठूलो महत्व हुन्छ । त्यसो त सेलिब्रेटीहरुका लागि झन् यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । बलिउडका नायिकाहरुले आफ्नो सुन्दरता बढाउन प्लास्टिक सर्जरी अनि अनुहार चम्काउने ट्रिटमेन्ट गराउँछन्। नायिकामात्र होइन, नायकहरु पनि आफ्नो ‘लुक्स’ राम्रो देखाउन विज्ञानको मद्त लिने गरेका छन् । सलमान खान, अक्षय कुमार जस्ता सफल नायकहरु कुनै बेला तक्ले थिए । कपाल झर्ने समस्याले पिरोलिएका यी नायकहरुले ‘हेयर ट्रान्सप्लान्ट’ गरिसकेका छन् । यी ८ नायक जसले कपाल रोपेर ह्यान्डसम बने ।
६ बैशाख २०७३, सोमबार १२:०४	0 2,362
तपाईको मोबाइल/ल्यापटपमा वाइफाईको सिग्नल देखिन्छ तर पासवर्ड नभएर वाइफाई चलाउन पाइराख्नु भएको छैन भने अब ढुक्क हुनुस । तपाईका लागि हामीले केही टिप्ससहितको खुराक ल्याएका छौ । यी एप्सहरु प्रयोग गरेर निर्धक्क वाइफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउन सक्नु हुन्छ । कुन कुन हुन् त वाइफ़ाइको पासवर्ड पत्ता लगाउने ५ एप्स ?
५ बैशाख २०७३, आईतवार १५:४२	0 1,148
५ बैशाख २०७३, आईतवार १०:५०	0 842
पेट्रोलियम पदार्थ सिमित देशहरुमा मात्रै उत्पादन हुन्छ तसर्थ बिश्वका थुप्रै देशहरु डिजेल पेट्रोलको अभावमा पिरोलीरहेका छन् । यसबाट नेपाल पनि अछुटो छैन । केही समय अघि भारतीय नाकाबन्दी हुँदा देखिएको हाहाकारले सर्वसाधारणले हदैसम्मको दुख भोग्न बिबस भए । भारतका एक मेकानिकले पानीबाट चल्ने गाडी बनाएर चमत्कार गरेका छन् । हेर्नुस भिडियो
३ बैशाख २०७३, शुक्रबार ०९:२०	0 525
२ बैशाख २०७३, बिहीबार १३:०२	0 1,439
२ बैशाख २०७३, बिहीबार ०८:१२	0 670
०७२ साल नेपालका लागि ऐतिहासिक बर्ष बन्न पुगेको छ । भूकम्प, संविधान, नाकाबन्दीलगायतका महत्वपूर्ण घटनाले २०७२ साल मुलुकका लागि इतिहासमै सबैभन्दा बढी उथलपुथल भएको वर्ष बन्यो । भूकम्पको भय यस वर्षको सुरुमै वैशाख १२ गते मध्याह्न करिब ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा गएको ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो । भूकम्पबाट आठ हजार ८५६ जनाको ज्यान गयो भने २२ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार भूकम्पबाट ६.७ खर्ब रूपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भयो । बर्ष भरि नै आम सर्वसाधारण भूकम्पको भयमा बाच्न बिबस बने । त्यो भूकम्पको परकम्पन अझै रोकिएको छैन । संबिधान संविधानसभाबाट संबिधान जारी गर्ने नेपालीको चाहना यो बर्ष पूरा भयो । भदौ ३० गते संविधानसभाबाट दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतले पारित नेपालको संविधान असोज ३ गते मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति डा रामवरण यादवद्वारा लागू भएको घोषणा भयो । नाकाबन्दी संबिधान जारी भए लगतै भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्यो । नेपाली जनताले झन्डै पाँच महिना निकै दयनीय दैनिकी बिताउन पर्यो । संविधानका केही विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै संयुक्त मधेसी मोर्चाले तराई मधेस ठप्प पा¥यो भने भारतले दक्षिणी सिमानामा नाकाबन्दी गर्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री थापा र कोइरालाको निधन २०७२ सुरुवातसँगै वैशाख २ गते पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता सूर्यबहादुर थापाको उपचारका क्रममा भारतको नयाँदिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालमा निधन भयो । यसै वर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको ७६ वर्षको उमेरमा माघ २६ गते आफ्नै निवास, महाराजगन्जमा असामयिक निधन भयो । शेर बहादुरलाई लक्की नेपाली काँग्रेसको फागुन २० देखि २४ सम्म राजधानीमा सम्पन्न १३औँ महाधिवेशनले सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचित गर्यो् । त्यस्तै पूर्वसभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि रिक्त काँग्रेस संसदीय दलको नेतामा पनि देउवा नै निर्वाचित भए । ह्यारी र ओलीको भ्रमण चैत ६ देखि बेलायतका राजकुमार हेनरी चाल्र्स अल्बर्ट डेभिड ‘ह्यारी’को नेपाल भ्रमण भयो । बेलायती शाही परिवारका सदस्यले दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको २०० वर्ष पुगेको अवसर पारेर नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेको हो । यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फागुन ७ गतेदेखि भएको भारत भ्रमण र चैत ७ गतेदेखि भएको जनगणतन्त्र चीनको भ्रमण पनि नेपालको राजनीतिमा दूरगामी महत्वका रहे । दुवै छिमेकी मुलुकसँग भएका पारवहन सम्झौता मुुलुकका लागि ऐतिहासिक बन्यो । खेलकुद बिबाद र उपाधि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा विवाद, म्याच …
३० चैत्र २०७२, मंगलवार १६:५६	0 646
अबको केही घण्टामा हामी नया बर्षमा प्रवेश गर्दै छौ । यो बर्ष थुप्रै उथलपुथलहरु भए । कतिपयका लागि जीवनभर नमेटिने दाग बने भने कतिपयका लागि सुखद रहे । समग्रमा यो बर्ष खासै सफल बन्न सकेन । त्यसका बाबजुद पनि केही आशातित प्रगतिहरु भने नभएका होइनन । यो बर्ष बिशेषत: केही महिलाहरुका लागि स्मरणीय बर्षको रुपमा रहन सफल भयो । यो वर्ष नेपालले प्रमुख पाँच पदमध्ये राष्ट्रपति, सभामुख तथा प्रधान न्यायाधीशका रूपमा महिला नेतृत्व प्राप्त गरेको छ । ओनसरी घर्ती मगर लामो समयदेखिको नेपाली जनताको चाहना यो बर्ष पूरा भयो । यो बर्ष संविधानसभामा जनताद्वारा निर्वाचित करिब ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सहमतिमा नेपालको संविधान–२०७२ जारी भएको हो । यो संविधानसँगै नेपालमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता एवं संघीयताको नयाँ इतिहास प्रारम्भ भएको छ । यसको कार्यान्वयनको पक्ष जटिल अवश्य छ तर संविधानमा समेटिएका विषयवस्तुको हिसाबले यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानहरूमध्ये एक मानिएको छ । संविधान निर्माणपछि संविधानसभालाई व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण गरियो । त्यसपछि लामो समय सभामुख रहेका सुवास नेम्वाङको स्थानमा ओनसारी घर्ती सभामुख निर्वाचित भइन् । १० बर्ष युद्ध लडेकी एउटी दुर्गम ठाउँकी महिला मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुग्ने अबसर यसै बर्ष मिल्यो । विद्यादेवी भण्डारी यसै बर्ष नेपालले पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा विद्या भण्डारीले नाम लेखाउन सफल बनिन् । संसदमा भण्डारीले ३ सय २७ मत पाएर राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन् । भण्डारीले कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्रि कुलबहादुर गुरुङलाई पराजित गर्नुभएको हो । गुरुङले २ सय १४ मत प्राप्त गरेका थिए । २०१८ साल असार ५ गते भोजपुरको मानेभञ्ज्याङ गाविसमा पर्ने गुराँसेमा जन्मिएका भण्डारीले २०३९ सालमा तत्कालिन नेकपा (माले)का नेता मदनकुमार भण्डारीसँग भूमिगत विवाह गरेका थिए । २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दाशढुंगामा भएको रहस्यमय जीप दुर्घटनामा भण्डारीको निधन भएपछि राष्टपति भण्डारी राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । राष्ट्रपनि निर्वाचित भण्डारीले २०६७ सालमा रक्षा मन्त्री भएर काम गरेका थिए । सुशीला कार्की सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशका रूपमा अबको केही दिनमा नियुक्त हुदै छिन । उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आगामी वैशाख १ गतेदेखि अवकाश पाउँदै छन् । कानुन अनुसार अब संसदीय समितिबाट कार्कीको नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिन्छ । विस २०६५ साल माघ ९ गते सुशिला सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी हुन् । त्यसको दुई वर्षपछि ०६७ मंसिर २ गते उनी सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनिन् । अहिले उनी बरिष्ठ न्यायाधीश छिन् । कार्कीको ’boutमा थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । नविना लामा नेकपा एमाले निकट …
३० चैत्र २०७२, मंगलवार १०:३७	0 1,144
२९ चैत्र २०७२, सोमबार १५:५४	0 821
२९ चैत्र २०७२, सोमबार ०७:५७	0 568
अबको केही साता भित्र मुलुकले पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश पाउने छन् । संवैधानिक परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीको नाम सिफारिस गरेको छ । कार्की नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक महिला प्रधानन्यायाधीश हुने छिन् । उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आगामी वैशाख १ गतेदेखि अवकाश पाउँदै छन् । कानुन अनुसार अब संसदीय समितिबाट कार्कीको नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिन्छ । सबैको चियो र चासोको पात्र बनेका कार्कीको बारेमा हामीले ५ जानकारी प्रस्तुत गरेका छौ जुन तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ र थाहा पाई राख्न जरुरी पनि छ ।
२८ चैत्र २०७२, आईतवार ०९:११	0 1,524
२७ चैत्र २०७२, शनिबार १३:५५	0 842
२६ चैत्र २०७२, शुक्रबार १५:१४	0 499
व्यक्तिको शारीरिक हाउभाउ बुझ्ने कार्य हो अन्तरबार्ता । हरेक रोजगारीका लागि अन्तरबार्ता अनिवार्य छ । त्यसो त लिखितमा एकदमै राम्रो गर्नेहरु समेत अन्तरबार्तामा हुने सानोतिनो हेलचेक्राइले अघि बढ्न सक्दैनन् । अन्तरबार्ताको तयारी गर्ने बारे बिभिन्न अध्ययन पुस्तकहरु समेत पढ्न पाइन्छ । तर अचम्म लाग्दो कुरा के भने कतिपय कार्यालयले अंतर्बर्ताका क्रममा एकदमै अवाक बनाउने प्रश्नहरु सोध्ने गरेका छन् । जसले तपाईलाई अचम्ममा पार्ने गर्दछ भने कतिपयलाई रिस पनि उठ्न सक्छ । तर रिसाउनु भयो भने तपाइकै लागि घाटक हुन्छ । यस्ता हुन्छन उट्पट्याङ प्रश्नहरु